Des biographes familiaux font un livre de vos souvenirs, idées, témoignages - SCRIBIOMEMO
Miaino anao avy hatrany
Ny fitiavanay manoratra...
... manome aina ny fahatsiarovanareo
Ny Mpanoratra Fahatsiarovana dia fikambanana lehilahy sy vehivavy nisafidy ny hampiasa ny fitiavany manoratra hamelomana ny fahatsiarovanao, ny hevitrao na ny zavatra nandalo tamin’ny fiainanao. Mainga amin’ny teny omenao no hananganana fehezanteny ary rehefa mikambana izany rehetra izany dia lasa boky.
Mba ahafahana miasa ao anatin’ny fahatokisana sy ny fanarahampenitra ary ny ahazona ainga-panahy amin’ny maha olombelona no antony nananganana ity tambazotra manerantany ity. Misokatra hoan’ny tsirairay ary natao hanatevenana ny fomba fijery ny fomba fampianarana ny Mpanoratra Tantarapiainana. Tokana ary iray ihany ny fianarana an’ity taranja ity eran’izao tontolo izao.
Rehefa nandeha ny fotoana sy ny fifandraisana dia nihatsara avy hatrany ny fifankazahon’ny Mpanoratra Tantara. Eny na dia teo aza ny fifanalavirana dia nihamafy ny finiavana hanao zava-dehibe ity fikambanana ity. Ny Mpanoratra Fahatsiarovana dia vonona hiara hiasa sy amin’ny fikambanana hafa. Na dia eo aza ny mahasamihafa antsika, izay indrindra no atao ho antony handrosoana, ahafana hampitombo ny fahaizana amin’ny fizarana. Rehefa mahay mandrava ny sakana, dia mora kokoa ny miresaka na dia tsy mitovy fiteny aza...
Ity asa ity dia misy fitsipika tsy maintsy arahina na dia ampitiavana aza no hanaovana azy. Ary samy tomponandraikitra sy mahaleo tena ny Mpanoratra tsirairay. Hisy fifanekena tsy maintsy eken’ny Mpanoratra sy ny Mpampanoratra mba ho matotra ny fiaraha miasa.
Ny pejy hosoratanay ho anareo dia atao manaraka tanteraka amin’ny zavatra nitranga tamin’ny fiainanao. Atao matihanina avokoa ny fomba fiasa, tsy asina mihoatra ary tsy misy alatsaka ny teny voalaza. Atao misongadina avokoa ny fomba fijerinao, fomba fiteninao, mba ahafahan’ny mpamaky boky mahatsikaritra avy hatrany hoe “Tantaranao ity boky ity”
Mpanoratra, Tantarampiainana, boky, Malagasy, Mpanantonta, Tantara, Hevitra, Mpampanoratra, Tsiaro, tadidy, Taratasy.